Kulan looga hadlayay iskaashiga iyo horumarinta gobolada dalka oo lagu qabtay Muqdisho – Radio Muqdisho
Kulan looga hadlayay iskaashiga iyo horumarinta gobolada dalka oo lagu qabtay Muqdisho
Wasiiru dowlaha Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee dowladda Soomaaliya iyo guddoomiyaha cusub ee gobolka banaadir ayaa kulan la qaatay mas’uulyiin ka tirsan maamul goboleedyada kira dalka.
Kulankan oo uu soo qaban qaabiyay Maamulka gobalka Banaadir ayaa waxaa looga hadlay sidii la isaga kaashan lahaa horumarinta Gobalada dalka, iyadoo Inta uu kulanka uu socday lagu gorfeeyay marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray dalka dhowr kiisano ee lasoo dhaafay iyo meesha uu haatan taaganyahay, isbadalka muuqdo iyo sidii la isga kaashan lahaa horumarka iyo xasiloonida guud ahaan dalka.
Mas’uuliyintii ka socotay dowlad gobaleydyada dalka ee kulanka ka qeyb galay waxa ay sheegen in la isku tanaa sulo oo midnimada Soomaliyeed laga wada shaqeeyo.
Guddoomiyaha Gobalka Banaadir ahna Duqa magaalada Mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale oo madasha kahadlay ayaa sheegay in haatan uu Dalku u jiheystay wadadii horumarka iyo xasiloonida, hase ahaate loo baahanyahay in si wadajir ah looga qeyb qaato dhismaha Qaranka.
Wasiir Dowlaha Wasaarada Arimaha Gudaha iyo Fedraalka ee Xukuumadda Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Xidig oo soo gunaaday kulanka ayaa kula dar daarmay maamulada Dalka kajira iyo qeybaha kala ee bulshada in ay iska kaashadan xasiloonida dalka iyo in laga hortago masuq maasuqa.
Wasiirro ka tirsan Galmudug oo kormeeray xarumaha adeegga bulshada ee Galkacyo”Sawirro”
Wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga Kenya oo booqday xeryaha qaxootiga Dhadhaab “Sawirro”
Wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga Kenya oo booqday xeryaha qaxootiga Dhadhaab "Sawirro"